Matte Black 4 Inch Musqusha Xarumaha Xarumaha
Bogga ugu weyn / Qubeyska Musqusha / Tuubooyinka Gacanta Labaad ee Qolka Musqusha / WOWOW Qasabadda Musqusha Xarunteeda Qasnadaha oo leh Matte Black Assembly
qiimeeyay 4.85 out of 5 ku salaysan 20 ratings macaamiisha
(20 dib u eegista macaamiisha)
Musqusha musqulaha ee matte madow 2 gacan qaadashadeeda ah ayaa leh wax qabad iyo naqshad casri ah 1. Iyadoo la hubo 3 sano. Dukaameyso tubbada tubada qolka musqusha 2 hal gacanta hadda!
2321400B tilmaamaha rakibaadda
Musqusha Xaashida Musqusha gidaarkeedu wuxuu ku dhegan yahay Madoow
WOWOW Tuwaalka Wareega Wareegtada Matte Black
Musqusha Matte Black Single Hooks Musqusha
Qubeyska musqusha matte madow 2 gacantas 2321400B
Maaddaama dad badani doortaan qalin ama musqusha qasabadda musqusha, waxaad ku samayn kartaa war-bixin ballaaran oo moodal leh qasabadda musqusha madow. Ma aha oo kaliya midabkani inuu ku siinayo musqushaada muuqaal quruxsan oo gaar ah, midabka madow ee madow ayaa wali ah mid qarsoodi ah oo caadi ah sidoo kale. Maaha si kadis ah matte madow wuxuu noqday midab casri ah oo casri ah markay tahay naqshadaha musqusha. Matte madow waa isbeddel aan si dhakhso leh u afuufaynin gabi ahaanba. Dhamaadka madow ee matoorka tuubada musqusha ayaa siin kara taabasho casri ah musqusha kasta.
Mid baa dhayalsan kara xaqiiqda ah in qasabadaha musqusha ay yihiin mid ka mid ah astaamaha ugu muhiimsan ee musqusha ku saabsan qaab kasta. In kasta oo qasabadaha musqusha ay yar yihiin, dadku waxay u muuqdaan inay diiradda saaraan qasabadaha musqusha maaddaama aragoodu uu si otomaatig ah u soo jiito goobahan diiradda. Sidaa darteed qasabadaha musqusha ayaa sameyn kara ama jebin kara musqusha kasta. Musqusha musqusha waxay awood u leeyihiin inay kor u qaadaan musqusha. Musqusha fudud ama aadka u yar waxay heli kartaa kor u kac ballaaran oo leh qasabadaha suuliga qurxoon. Naqshadeynta naqshadaha qadiimiga ah ee qashin-qubadan musqusha WOWOW waxay musqushaada ka dhigeysaa mid moodda hal mar. Musqusha qasabadda musqusha matte madow 2 gacanka WOWOW waa mid ka mid ah qasabadaha musqusha kuwaas oo runtii wax ka beddeli kara qurxinta musqusha.
Qubeyska musqusha madow ee leh laba gacan
Style waa hal shay, laakiin shaqeynta xitaa wey ka sii muhiimsan tahay. Saldhig maalinle ah waxaad u isticmaashaa musqushaada dhowr jeer waxaadna dooneysaa in musqushaadu ay kuugu adeegto hab kaa taageeraya howl maalmeedkaaga. Taasi waxay ku xisaabtamaysaa shaki la'aan howlaha sida qubeyska iyo qubeyska qubeyska. Laakiin waxaad u badan tahay inaad isticmaasho saxanka musqusha xitaa in ka badan astaamaha kale ee musqushaada. Taasi waa sababta ay tahay inaad xitaa ugu fiirsato dhinacan musqushaada. Ka sokow saxanka musqusha ee habboon, tuubada musqusha ayaa dejisa dhammaan howlaha aad u baahan tahay.
Qasabadda musqusha matte madow 2 gacmeed ee WOWOW waxay damaanad qaadeysaa khibrad biyo weyn. Qasacadan musqusha madow ee 4 inch ah waxay leedahay 2 gacan. Mashiinnadaas waxaad ku hagaajin kartaa heerkulka biyaha iyo xawaareyn aad ugu sarreyn kartaa baahiyahaaga. Qalabka qaanso-dheerku wuxuu ku siinayaa meel ku filan inta u dhexeysa xuubka iyo musqushaada si aad si raaxo leh gacmahaaga u dhaqdo ama wejigaaga u mayrto. Masaafada waa 4.4 inji oo waxay bixisaa meel ballaaran. Sidaa awgeed, uma baahnid inaad la halgamo meel bannaan sida xamaamka qolka jiifka ee hooseeya.
Iskusoo wada duuboo, biiyaha wareega ee musqusha qasacad matte madow 2 gacmeed ee WOWOW waxay bixisaa wareeg 360-wareeg ah oo ku habboon isticmaalkeeda. Musqusha qasabadda musqusha matte madow 2 gacmeed waxay la imaaneysaa wiishka wiishka ee isla midabka madow si loo sameeyo hal midnimo musqushaada musqusha. Si sahlan ayey u fududahay in la furo oo la xiro kulankan bullaacadda iyadoo leh iskudhaf isku dhafan xaga dambe ee qasabaddan musqusha.
Tubbada tubbada qolka koowaad waxay matte madow 2 gacan qaad
Ka sokow naqshadaheeda casriga ah iyo geesinimada leh, WOWOW waxaa badanaa lagu yaqaan heerarkeeda tayada sare leh. Maaddaama ay ka soo riixeyso heerkan tayada ka soo jeeda guddiga sawirka saxda ah ee warshaddooda casriga ah, faahfaahin kasta oo yar oo ka mid ah qasabaddan musqusha ayaa lagu hagaajiyay ugu badnaan. Taasi waxay ku siineysaa qasabad tayo sare leh oo musqusha ah oo ujeedadeeda si wanaagsan ugu adeegi doonta isla markaana damaanad qaadi doonta adkeysi nolol dheer.
Lugta waarta ee WOWOW musqusha tubada matte ee madow 2 gacmeed waxay ka sameysan tahay walxo naxaas adag leh maadaama tani ay damaanad qaadayso waxqabadka ugu wanaagsan iyo adkeysiga ugu dheer. Sidoo kale dhismuhu wuxuu ka samaysan yahay naxaas adag oo wuxuu ku dhammaaday aaladda zinc. Uma baahnid inaad ka walwasho arrimaha daxalka maadadan darteed. Ka sokow, qasabaddan musqusha ayaan lahayn macdanta `` lead '' si looga ilaaliyo qoyskaaga inta ugu badan. Waxaad dareemeysaa kala duwanaanta tayadaan isla marka aad haysato. Musqusha musqusha madow ee matte-ka madow ee 2 gacmo-qabsi ayaa iyaduna u adkaysta wasakhda sidoo kale. Sidaa darteed way fududahay in la ilaaliyo. Taasi waa waxa aad hesho marka aad iibsanayso qasabad musqusha oo tayo sare leh.
Qubayska musqusha dhaqaala ahaan 2 matel madow
Qalabka ugu sarreeya ee dhoobada dhoobada ah ee gudaha musqusha naqshadeeye ee madow madow wuxuu ka dhigayaa biyaha qulqulka si habsami leh oo aan faleebo lahayn. Qaybta ay ka kooban tahay qasabaddan musqusha waxay ka kooban tahay aerator ABS. Wejigan cusub waxaad awoodi doontaa inaad ku badbaadiso isticmaalkaaga biyaha oo aad ka caawiso ilaalinta biyaha sidoo kale. Qalabka NSF-ka ee shahaadada haysta ayaa si habsami leh u beddelaya si uu kuugu deeqo raaxada ugu badan. Kateetarka tayada sare leh waxaa lagu tijaabiyey 500,000 oo wareeg oo biyo ah, welina si wanaagsan ayuu u shaqeynayay. Tanina waa qiime weli dhaqaale ah!
Maaddaama habka wax soo saarka ee WOWOW uu yahay mid heer sare ah oo otomatig ah, WOWOW waxay ku siin kartaa qubadan tayada sare leh ee musqusha matte madow 2 gacmeed qiimo aad u sarreeya. Si wada jir ah ula soo iibsiga waxtarka iyo kharashka badan leh iyo adeegsiga agabyada, WOWOW waxay si guud u badbaadisaa qarashyada wax soo saarka. Haddana iyada oo aan lumin ujeedada ugu weyn ee soo saarista alaab tayo sare leh oo aan la arki karin. WOWOW waxay damaanad qaadeysaa inaadan heli doonin qasabad musqusha oo isku tayo ah qiimo ka hooseeya inta aan bixinno.
Way fududahay in la rakibo oo si fudud loo dayactiro
Qalabkan musqusha ee matte-yada ah ee mattiga madow leh oo leh 2 gacmo-qabsi waa fududahay inaad adigu iskaa u rakibto adiga oo aan lahayn xirfadle. Sidan ayaad xitaa waxbadan ku keydin kartaa adoo ku rakibinaya suuligan qasabad matte madow 2 gacmeed naftaada. 4-ta tubbada musqusha 3 inch waxay ku habboon tahay wiish kasta oo 2-dalool ah. Musqusha qasabadda musqusha matte madow XNUMX gacmeed waxay la timid dhowr qalab si loogu rakibo gabal keeg ah, oo ay ku jiraan tuubbo biyo ah, bullaacad wiishka lagu rido iyo saxan gogol si loogu rakibo.
Qolka musqusha ee matoorka madow matoorka 2 gacanka WOWOW waxaa lagaa hubin doonaa qasabad musqusha ka sareysa dhamaan heerarka warshadaha. Waxaad awoodi doontaa inaad si fudud u dayactirto qasabaddan musqusha, intaad haraaga biyo hadhaysid adigoo taabanaya farahaaga jilicsan. Maaddaama qasabaddan musqusha ay fududahay in la nadiifiyo, waad sii wadan kartaa isticmaalka qasabaddan muddo dheer, adigoo dammaanad qaadaya heerarka biyaha oo tayo sare leh. WOW maaha wax bixiya muddo 3 sano ah oo dammaanad qaad ah si loo damaanad qaado waxqabadka musqusha qasabaddeeda matte madow 2 gacmeed.
Faa'iidooyinka tubbadda musqusha waxay matteysaa 2 gacan-qaadis madow marka loo eego:
Design Naqshadeyn gaar ah oo qafiif ah madow
Uc tubada sare ee arc-ga si ay u fududaato dhul ballaadhan
Spo Si tartiib ah oo jilicsan oo si tartiib ah u dareeraya
Performance Bandhig heer sare ah
Warranty 3 sano oo damaanad ah
SKU: 2321400B Categories: Qubeyska Musqusha, Tuubooyinka Gacanta Labaad ee Qolka Musqusha Tags: daadinta kulanka, laba gacan, tubada saxanka biyaha
Qaad Wiishka Bullaacadda
Gabi ahaanba JECEL qasabadan. Kama adkaan kartid qiimahan tayaduna waa cajiib.
Waan jeclahay muuqaalka qasabadani. Waxay ku sameysay farqi weyn muuqaalka musqusha. Qiimo aad u macquul ah.
*** s2020-03-22 Mareykanka
Qasabadaha quruxda badan. Si adag ugula talin iyaga. Qiimo weyn
Runtii waan ku faraxsanahay sheygan- si fiican ayaa loo sameeyay oo si sahlan loo rakibo. Tilmaamuhu waa kuwo horay u soconaya, waxaad u baahan tahay oo dhan (qasabadaha laga jaro) ayaa ku soo dhacaya xirmada, badeecada ugu dambeysa waxay u egtahay mid fiican! Waan jeclahay sida tuubadu u qeexayso!
Waxay umuuqataa mid fiican, shaqooyin fiican. Mar kale heli lahaa
Aad u fudud oo fudud si loo rakibo. Jacaylka in hillaaca rogrogmada
Waan dalbaday tan waxaanan helay qasabaddan musqusha madow fiidkaas oo lagu rakibay nus saac gudahood casriyeyn aad u wanaagsan. Mahadsanid.
qurux badan oo tuubbo qiime fiican leh ayaa sheegay inay ahayd qasabad fiican oo tayo fiican leh qiimaha
Tuubbadeyda ayaa yiri labadan qasabadood ayaa aad u fudud in la rakibo. Cadaadiska biyaha waa mid aad u wanaagsan, gaar ahaan biyaha kulul. Waxaan jecelahay in qulqulaya qulqulaya oo hadda waxaan buuxin karaa waxyaabaha ku jira musqusha oo maahan inaan aado qasabaddayda jikada sare.
Si fudud loo rakibo, waxay umuuqataa tayo wanaagsan oo aad u qurux badan! Waxay u egtahay mid hodan ah oo iswaafajiyay.
Waxaan jecelahay qasabaddan musqusha laba gacmood oo aad u muuqda oo heer sare u muuqda qaali oo ay fududahay in la rakibo
Tirada lagu kalsoonaan karo iyo nashqadda casriga ah ee qasabaddan. Ku habboon qolka musqusha guriga
Cusbooneysiin weyn musqusha. Naqshad jilicsan, oo deg deg ah oo fudud.
Markii hore xoogaa waan yara adkaaday (khibrad la’aan awgeed). Tuubbadeyda ayaa i caawisay. Waxaan ku raacsanahay in qiimaheeda uu yahay mid layaableh, xaqiiqdii waxay u egtahay mid qaali ah oo tayada waa weyn tahay. Aad loogu talinayaa in la iibsado! !
Waxaan haystay nin gacmeed sameeye oo rakibaya miinadayda, laakiin wuxuu yidhi way fududahay in la rakibo. Isla markiiba waxay u beddeshay musqushayda muuqaalkii casriga ahaa ee aan tegayay.
Prefect - Qasabadani Musqusha si fiican ayaa loo soo baakadeeyay oo tayo sare leh
Runtii sifiican ayuu u shaqeeyaa, Qasabadaha oo muuqaal aad u casri ah leh
Jecel muuqaalka iyo waxqabadka qasabaddan. Durdurku waa weyn yahay! Waxaan jecelahay in tuubada kolba dhinac loo raro. Xaqiiqdi ma iibsan laheyd markale!
Cusbooneysiinta waxay u egtahay saxanka duugga ah iyo dhererka dheer waxay siineysaa qol badan socodka socodka biyaha. Qiimaha weyn ee lacagta!
Tuubadaani way fududahay in la rakibo. Muuqaalka sidoo kale waa mid aad u qurux badan. La awoodi karo.
La iibiyey: 18
WOWOW Nadiifiyaal Qolka Qubeyska Nickel Faucet Centerset